ယူရိုဇုန်၏ စက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဒေတာPMIကို သြဂုတ်လ ၂၂ရက်နေ့ ၁၀:၀၀MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်.
PMI သို့မဟုတ် ၀ယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းသည် စက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ၀ယ်ယူမှုသဘောထားစစ်တမ်းများကို ထုတ်ပြန်ပေးသည့်ဒေတာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်. လက်ရှိလအတွက် ထုတ်ပြန်ပေးမည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တနည်းအားဖြင့် PMIဒေတာသည် ယူရိုဇုန် စီးပွားရေးအခြေအနေကို အပ်ဒိတ်သိရှိနိုင်မည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒေတာ 50.0အထက်ရှိခဲ့ပါက ယူရိုငွေကြေးအတွက် အားကောင်းစေမည့်အချက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာအားမကောင်းပါက ယူရိုတန်ဖိုးလျော့ကျလာနိုင်ပါသည်. EUR/USDနှင့် ယူရိုနှင့်တွဲထားသော ငွေကြေးအတွဲအားလုံးအတွက် အရေးကြီးသည့်ဒေတာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်.